Tratra ireo mpanao Kidnapping Karana : mpitandro filaminana ny iray,sady namatsy fitaovam-piadiana | NewsMada
Tratra ireo mpanao Kidnapping Karana : mpitandro filaminana ny iray,sady namatsy fitaovam-piadiana
Par Taratra sur 27/07/2016
Niakatra fampanoavana, omaly, ilay mpitandro filaminana sy ireo namany izay voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny raharaha fakana an-keriny Karana. Mbola hita tany amin’izy ireo ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny fiara nampiasain’izy ireo…
Io àry! Jiolahy maromaro indray saron’ny polisy misahana ny heloka bevava, nanomboka ny asabotsy 15 jolahy ka hatramin’ny herinandro lasa teo. Fakana an-keriny sy fanafihana mitam-piadiana, fisandohana, fisolokiana ny heloka anenjehana azy ireo. Basy Kalachnikov iray sy P.A efatra ka ny roa vita gasy niaraka tamin’ny bala maromaro no nampiasan’ireo jiolahy. Nahitana mpitandro filaminana mpiambina minisitra iray amin’ireo voarohirohy tamin’ilay raharaha fakana an-keriny teratany karana, ny volana jona lasa teo izay nafenin’ireo jiolahy teny Ambohidratrimo, araka ny fanazavan’ny polisy misahana ny heloka bevava. Heverina ho mpamatsy fitaovam-piadiana ireo jiolahy izy io. “Mbola ao anatin’ny fanadihadiana ny polisy amin’izao ka ho fantatra aorian’izay ny marina rehetra”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny heloka bevava, ny kaomisera Rakotondrasoa Jean de Matha, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly teny Anosy.
Niainga avy amin’ny fahatrarana jiolahy maromaro nikononkonona fanafihana mitam-piadiana teny amin’ny faritra Ambodifilao, Behoririka, Ankadifotsy sy ny manodidina no nahafahana nisambotra ireo namany. Nahazo loharanom-baovao tamin’ny polisin’ny BC momba izany rahateo ny polisy ka nametraka ny fepetra rehetra ahafahana manara-dia ireo olon-dratsy. Jiolahy iray mampiahiahy no tratran’ny polisy teny Ankadikely sy jiolahy iray izay efa fantatry ny polisy ka nosamborina avy hatrany. Fantatra taorian’ny fanadihadiana fa nanomana fanafihana mitam-piadiana eny amin’ny faritr’i Behoririka iny izy ireo. Natao ny vela-pandrika ho an’ireo namany hafa ka voasambotra teny Andravoahangy ny jiolahy iray niaraka tamin’ny basy P.A iray miaraka amin’ny akanjona mpitandro filaminana. Izy indray no nanondro ny namany izay notsimponin’ny polisy tsikelikely taorian’izay.
Gadra efa nahavita sazy ny sasany amin’izy ireo…
Nohamafisin’ny polisy misahana ny heloka bevava hatrany fa jiolahy efa nahavita sazy ny sasany amin’izy ireo, saingy niverina nanohy ny asa ratsiny indray taorian’izay. Tao koa anefa ireo nitsoaka ny fonja, raha ny fanazavana hatrany. Voalaza fa tompon’antoka tamin’ny fanafihana tobin-tsolika iray eny Anosizato sy Ambatomainty ry zalahy ireto. Teo koa ny fakana an-keriny ny teratany karana iray tao amin’ny Conforama, ny taona 2015, teo koa ilay teny Besarety sy Ambohidratrimo. Nampiasa fiara hatrany ry zalahy nandritra izany miampy fampiasana karatra hosoka amin’ny anaran’ny polisy misahana ny heloka bevava.